Pantone Color of the Year 2016 dia efa voafidy | Famoronana an-tserasera
Pantone dia manonona loko roa ho loko amin'ny taona 2016
Ny loko Pantone an'ny taona 2016 dia naseho, ary sambany izy ireo loko roa fa tsy iray monja. Ho an'ny 2016, afaka mandray anao tsara izahay izao ao amin'i Rose Quarts sy i Serenity.
Ny voalohany dia tonony hita ao ny mavokely mazava ary ny iray manga pastel mirona volomparasy. Pantone dia hita ho iray amin'ireo manampahefana amin'ny fametrahana ny fironana amin'ny taona amin'ny loko hatramin'ny 2000.
Tamin'ny taona 2000 dia ilay loko manga ceruleana no nantsoin'i Pantone voalohany. Nanomboka tamin'izay, ny lokon'ny taona dia nisy fiatraikany lehibe amin'ny varotra avy amina orinasa iray manana tantaram-piainana 53 taona izay, noho ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa toa an'i Sephora sy KitchenAid, ary koa sary hosodoko nataon'ireo mpanakanto fanta-daza, dia afaka nanome famantarana bebe kokoa an'io loko miloko hita fa izy io ny taona.
Ireo loko roa voafidy ireo, ny Rose Quarts (Pantone 13-1520) ary Serenity (Pantone 15-3919), dia noho ny zava-misy ankehitriny amin'ny fifanakalozan-kevitra mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy. Izy io dia misy ifandraisany amin'ny fironana amin'ny loko amin'ny sehatry ny endrika sy ny hetsika ara-tsosialy izay misy ifandraisany amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. Ny alokaloka sasany izay misy dikany lehibe amin'ny fiainana toy ny mavokely, raha manga izay mitarika antsika amin'ny filaminana ao amin'ny Fahatoniana.
Loko roa izay hametraka fironana amin'ny taona ho avy ary ho hitantsika izany amin'ny endrika lamaody vaovao, interface ho an'ny rindranasa na mety ho doka izay mitady hampifaly ny mpijery. Adala sasany amin'ny mofomamy mandritra ny taona vaovao izay hiverina amin'ny heriny sy ny heriny bebe kokoa ary tsy maintsy ho zava-dehibe ny fanovana, zavatra izay ataontsika amin'izao andro izao, toy ny fihaonamben'ny toetrandro any Paris.
Ny aloky ny ririnina fararano ity ireo dia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Pantone dia manonona loko roa ho loko amin'ny taona 2016
N steal Gómez Martínez dia hoy izy:
'Moñas' kely jereo Panrtone amin'ny 2016, hehe…;)
Valiny tamin'i Nief Gómez Martínez
JUstudy dia hoy izy:
tamin'ny herintaona niaraka tamin'ny marsala, ary izao ireo ... hita dia ny pantone dia tsy tia ny hamafiny na loko mamirapiratra
Valiny amin'i JUestudio
Torohevitra 20 amin'ny famolavolana doka tsara
Alex Trochut sy ny asany mahafinaritra: Raw Type